चीनबाट दश दिनभित्र ४४ लाख डोज भेरोसेल आइपुग्ने, भेरोसेल खोपबारे जान्नुपर्ने कुराहरु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
नेपाल सरकारले चीनसँग खरिद गरेको थप ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । ४४ लाख डोज खोपको भुक्तानी भइसकेको र एक हप्तादेखि १० दिनभित्र आइपुग्ने जनाइएको छ ।
दसैँसम्म ३३ प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिइसक्ने सरकारी योजना रहेको छ । त्यस्तै, १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिन ४० लाख डोज मोर्डना खोपको पनि टुंगो लागिसकेको र बाँकी ६० लाख डोज फाइजरको खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
अहिलेसम्म एक करोड चार लाख मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । ६० लाख डोज फाइजरको खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सार्वजानिक रुपमै बताइसकेका छन् ।
हाल खोप सकिएकाले विदेश जानेहरुलाई बाहेक अरुलाई दिइएको छैन ।स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. आरपी बिच्छाका अनुसार प्रदेशमा केही मात्रामा खोप मौजातमा रहेतापनि विभागमा आपतकालीन अवस्थामा दिन राखिएकोबाहेक खोप छैन ।
भेरोसेल कति उमेरको व्यक्तिले लगाउन सक्छ ?
गर्भवती महिलाले भेरोसेल लगाउन हुन्छ ?
अरु कस्ले लगाउन सक्छ भेरोसेल ?
भेरोसेल भ्याक्सिन कस्ले लगाउनु हुँदैन ?
भेरोसेल कति डोज लगाउनुपर्छ ?
भेरोसेल सुरक्षित र प्रभावकारी छ ?